विश्वकप फुटबल छनोट : नेपालको अभ्यास [फोटोफिचर] – Bihani Online
नेपालले असोज २३ गते बिहीबार अस्ट्रेलियासँग खेल्दै छ !
१९ आश्विन २०७६ १०:५१ October 6, 2019 bihani
विश्वकप फुटबल छनोट र एसियन छनोट खेल्न नेपाली टोली अहिले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा छ।नेपालले बिहीबार अस्ट्रेलियासँग राजधानी क्यानबेरामा खेल्दै छ।नेपालले पहिलो पटक अस्ट्रेलियासँग खेल्न लागेको हो ।
अस्ट्रेलियासँगको खेलको तयारीका लागि नेपाली फुटबल टोलीले सिड्नीमा बसेर अभ्यास गरिरहेको छ । नेपाली टोली बिहीबार नै सिड्नी आइपुगेको थियो । नेपालले सिड्नी स्पोर्टस एकेडेमीमा बसेर तयारी गरिरहेको छ ।
आइतबारको प्रशिक्षणमा सबै नेपाली खेलाडी उपलब्ध थिए । इन्डोनेसियामा लिग खेलिरहेका रोहित चन्द शनिबार सिड्नी आइपुगेका हुन् । उनीसँगैं विदेशमा लिग खेलिरहेका कप्तान एवंम गोलरक्षक किरण चेम्जोङ र स्ट्राइकर विमल घर्तीमगर पनि नेपाली टोलीस“गैं सिड्नीमा रहेका छन् ।
नेपालले खेल्न लागेको अस्ट्रेलिया सबैभन्दा माथिल्लो वरीयताको टोली हो । फिफा विश्व वरीयतामा अस्ट्रेलिया ४३ औं र नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा छ ।अस्ट्रेलियाले छनोटचरणको पहिलो खेलमा कुवेतलाई उसैको मैदानमा ३—० ले पराजित गरेको थियो ।
नेपाल त्यही कुवेतसंग उसैको मैदानमा ७—० गोलले पराजित भएको थियो । नेपालले दुई खेलमा एकमा विजय हात पारेको छ । नेपालले पछिल्लो खेलमा चाइनीज ताइपेइलाई २—० ले पराजित गरेको थियो । विश्वकप छनोटको इतिहासमा नेपालको त्यो पहिलो विजय रहेको थियो । साभार कान्तीपुर दैनीकबाट
(फोटो फिचर !)
सामाजिक तथा धार्मिक सदभाव भएको गाउँपालिका बनाउन चाहन्छु : कक्षपति
नेपालको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न आज संसदमा मतदान हुंदै
खोटाङमा प्याराग्लाइडिङको सफल परिक्षण
प्रदेश टुक्राउने कदम प्रतिको विरोध चन्द्रौटा मा बिरोध तथा सपथ ग्रहण सम्पन्न
वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्रदेव आचार्यको निधन
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पलाञ्चोक भगवतीको पूजा–अर्चना